कामशास्त्र Archives - Page2of5- Khabar Japan - News in Nepali
Tags: birth, couples, featured, healthtips, infertility, sextips
खबरडेक्स,२६ माघ । कुनै पनि दम्पतीको विवाह भएको एक वर्षसम्म परिवार नियोजनका कुनै पनि साधन प्रयोग नगरी सहवास गर्दा गर्भ बसेन वा भएन भने त्यसलाई बाँझोपन भनिन्छ । यसलाई अंग्रजीमा इनफर्टिलिटी भनिए पनि हिजोआज सबफर्टिलिटी शब्द प्रयोग हुन थालेको छ… बाँकी अंश »
कति बेला गर्ने सेक्स ?
Tags: featured, sextips, timeforsex
खबरडेक्स,२३ माघ । सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एका विहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड… बाँकी अंश »
योनी कसरी कसिलो बनाउने..
Tags: alert-news, featured, health, sextips, vaginatight
खबरडेक्स,५ माघ । यौनाङ्ग क्षेत्र तथा योनिको मांसपेशीलाई कडा राख्न केगेल कसरत एउटा राम्रो उपाय हो । यो कसरतका लागि पिसाब फेर्दा मांसपेशीको संकुचन गरेर पिसाब रोक्ने प्रयास गर्ने र यो प्रक्रिया दोहर्याएर, तेहेर्याएर उक्त मांसपेशी बलियो बनाउने । सुरुमा… बाँकी अंश »
केहि सेक्स टिप्सहरू
खबरडेक्स,२७ पुस । – आसन परिवर्तनले यौन जीवनलाई थप रोमाञ्चक बनाउँछ। – सधैं एउटै आसनमा यौनसम्पर्क राख्दा अपेक्षित आनन्द प्राप्त नहुन सक्छ सक्छ। – यौनसाथीकै सल्लाहमा विभिन्न किसिमका यौन आसन प्रयोग गर्न सकिन्छ। – यौनमा रोमाञ्चकता थप्न आसन मात्र होइन,… बाँकी अंश »
४-५ वर्ष कान्छो श्रीमानबाट सन्तान नभएको त होइन ?
Tags: agedifference, alert-news, childbirth, sex, sextips
खबरडेक्स,२७ पुस । समान्यत: श्रीमान्सँगै दुई वर्ष बस्दा वा नियमित (सातामा तीन पटक वा बढी) यौनसम्पर्क गरेको अवस्थामा र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरेको खण्डमा ८० प्रतिशत दम्पतीको गर्भ रहन्छ । २० प्रतिशतमा मात्र गर्भ नरहने हुन सक्छ । गर्भ… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, featured, interesting-facts, sexual-facts
खबरडेक्स,२५ पुस । अमेरिकाको राष्ट्रिय सर्भे कम्पनीले मानिसहरुको यौन सम्बन्धका विषयमा एक विस्तृत तथा महत्वपूर्ण सर्भेक्षण गरेको छ । जसबाट निकै रोचक तथा अनौठा खालका नतिजा समेत बाहिर आएका छन् । सर्भेक्षणको नतिजालाई समावेश गरी एक किताब समेत प्रकाशित भएको… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, sexual-satisfaction, slim-girl
खबरडेक्स,२५ पुस । मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि समेत प्रयोग… बाँकी अंश »